ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5) hplc≥98% | AASraw Nootropics
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / Fasoracetam အမှုန့်
SKU: 110958-19-5. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Fasoracetam မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (110958-19-5) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Fasoracetam အမှုန့် အရသာအတွက်အလွန်ခါးသောအရာအနံ့အမှုန့်, beige မှအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ piracetam ထက် Anti-amnesiac ပိုပြီးဖြစ်ပြီး, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါဟာ High-ဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှ Enhancer နှင့်ဦးနှောက် cortex အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ piracetam ဆင်တူ, pramiracetam ၏မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးသက်ရောက်မှုတစ်ခု adrenalectomy အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
Fasoracetam အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Fasoracetam အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 160-166 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဦးနှောက်ထပ်တိုးအသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်မှုန့်
Fasoracetam အမှုန့် Lam 105, NFC ကို-1, NS 105 အဖြစ်ကုန်သွယ်မှုအမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်အသုံးပြုမှု
ဒီအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအလုပ်အကိုင်နီးပါးမည်သည့်လယ်ပြင်၌ထိရောက်မှုတို့အတွက်သူတို့ခြေနဲ့ multi-တာဝန်အပေါ်အစာရှောင်ထင်နိုင်ပါလိမ့်လူတွေကိုအပေါ်တစ်ဦးဝယ်လိုအားသည်ရှိ၏, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကနေနိမ့်ဆုံးလုပ်ခအစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်သားရန်။ ထစောင့်ရှောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်ရန်ဒါကလိုအပ်ချက်အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်ကောလိပ်ကျောင်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးအဆင့် get နှင့်အကောင်းဆုံးစာတမ်းများရေးသားဖို့လိုအပ်ကြောင်း, ပြီးနောက်အားလုံး, ထိုခေတ်သစ် America မှာယှဉ်ပြိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများ, ပညာရှင်များနှင့်ရောနှောလူအားလုံး lay ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့လိုပေမည်။ Nootropics အာရုံကိုအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်လူကြိုက်များအသုံးပြုမှုမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ဖေါ်ပြခြင်းပြီမူးယစ်ဆေးဝါးမိသားစုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ racetam မိသားစု, အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအတွက်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုချင်းစီလုံးကိုကနဦး nootropic, piracetam မှဆင်းသက်လာကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများကောလိပ်ကျောင်းသားများကသူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့ကိုအလွန်လူကြိုက်များစေတော်မူပြီဖြစ်သောတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားထဲမှာ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလိုပဲမြှင့်တင်ရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ မကြာသေးမီကမှတ်ချက်၏ nootropic များထဲမှ Fasoracetam အမှုန့်, သို့မဟုတ်၎င်း၏သင့်လျော်သောအမည်ဖြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "5 - [(piperidin-1-yl) carbonyl] pyrrolidin-2-One" ဟုလုတ် (Rajaganapathy နှင့် et အနည်းငယ်သောအယ်လ် , 5127) ။ Fasoracetam အမှုန့်အဖြစ်လူသိများဒါကအထူးသဖြင့် racetam, အတော်လေးအလားအလာဖြစ်သက်သေပြနေသည်။
သေးလူသားတွေကို Fasoracetam အမှုန့်ကိုမျှစံထိုးရှိပါသည်။ 10 အဆိုပါ 15 အတွက်ပိုကြီးတဲ့ဆေးများနှင့်အတူ MG - - 30 တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ််ထမ်းဆောင်နှုန်း MG အဆိုပါသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားသေးငယ်ဆေးများ 50 န်းကျင်အထိအကြံပြုထားသည်။
Fasoracetam အမှုန့်၏အကျိုးကျေးဇူးများသို့ရာတွင်ထဲမှာအများအားဖြင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဆက်စပ်မှုအကြံပြုအချို့လေ့လာမှုများရှိပါသည်။ စိတ်ကြွဆေး-based ADHD ဆေးဝါး အသုံးပြု. ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ပေးကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ခြင်း fasoracetam သက်ရောက်မှုလေ့လာတယျ။ တောင်မှပိုကောင်း, Fasoracetam အမှုန့်ကဒီရည်ရွယ်ချက်အဘို့အမြင့်မားသောထိရောက်မှုအကြံပြုနိုင်သောကြောင့်စမ်းသပ်ကုသမှု II နှင့် III ကိုအဆင့်တွင်ဒုတိယအမြင့်စေတော်မူပြီ။ ဇွန်လ 2016 ၏သကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေး, ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်နေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။
Fasoracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအရ, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆွအကျိုးကျေးဇူးများကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်ကြသည်။ လူတစ်ဦး noopept ဖို့ဆွသက်ရောက်မှုနှိုငျးယှဉျနှင့်အခြားသောသူသည်ဆွထက်တစ်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ပေးပိုခဲ့ဟုဆိုသည်။
ဘေးဖယ်, ဤအာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကြိုးကြေးဇူးမြားထံမှအဖြစ်ကောင်းစွာအာရုံကြောသက်ရောက်မှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ တဦးတည်းကြွက်လေ့လာမှု Fasoracetam ကုန်ကြမ်းအမှုန့်မှတ်ဉာဏ်ပြတ်တောက်တားဆီးနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ racetam လိုင်းအကြားဘုံသည်နှင့် Fasoracetam အမှုန့်သည်ဤတူညီသောဂုဏ်သတ္တိများများစွာကိုပြသမယ်လို့သဘာဝကျပါတယ်။
Fasoracetam အမှုန့်၏နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကျိုးအတွက်လက္ခဏာနှင့် anxiolytic ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သင်ယူအကူအညီမဲ့နှင့်အတူကြွက်၏လေ့လာမှုတစ်ခုမူးယစ်ဆေး (ထိုကဲ့သို့သော MAOI interaction ကကဲ့သို့) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအချို့မပါဘဲအစွမ်းထက်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကဂါဘမြို့သား (ခ) ကို up-စည်းမျဉ်းတိရစ္ဆာန်အတွက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
အဲဒီမှာသိပ္ပံနည်းကျစာပေအတွက်ကုန်ကြမ်း Fasoracetam မှုန့်မျှမလူသိများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်လက်ရှိတွင်သော်လည်း, ကအန္တရာယ်များကနေအခမဲ့မဆိုလိုပါ။ မည်သည့်ဒြပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအန္တရာယ်များကိုအတူပါလာကြဘူး, ဒါပေမယ့်စမတ်မူးယစ်ဆေးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများကိုမူးယစ်ဆေးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုပြောပြနိုင်မသာ။
တဦးတည်း, တခြို့သို့ရာတွင်အစီရင်ခံစာများ orgasm အတွက်လျော့ချရေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးကတိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီကဒီသက်ရောက်မှုကိုကိုးကား, ဒါပေမယ့်ရှားပါးခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြား variable တွေကိုနှင့်အတူရှက်ကြောက်ပုံရသည်သိရသည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ nootropics အသုံးပြုသူများသည် (လစဉ်လတိုင်းဖြန့်ချိအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းရှိပုံ) ရော် Fasoracetam အမှုန့်တစ်ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဒီ racetam မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အသစ်တစ်ခုဒြပ်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 1960s အတွက်ဖန်တီး, piracetam မိသားစု၏ပထမဦးဆုံးနှင့်စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုကျော်ကြား nootropic မူးယစ်ဆေးတွေထဲကဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြီးအကျယ်သို့ရာတွင်ဖြစ်ကြပေမယ့်တောင်းဆိုမှုများ back up လုပ်ထားဖို့အချို့ပဏာမသုတေသနရှိသေး၏။ စာအရေးအသား၏အဖြစ်, Fasoracetam အမှုန့်  အာရုံစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) အတွက်အဆင့် II ကို / III ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးလျက်ရှိသည်။
အခြား racetam မိသားစုအတွင်းပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့  အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှတ်ဉာဏ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည်မွှမ်းတင်။ ဦးနှောက်ထဲမှာဂါဘမြို့သားထုတ်လုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမှစွပ်စွဲရမည်အကြောင်း, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ခံစားချက်နှင့်ဆက်စပ်သောအကြိုးကြေးဇူးမြား  လည်းရှိပါတယ်။ အထောက်အထားရှားပါးနိဂုံးမဟုတျပါဘူးသော်လည်း, ကယေဘုယျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်သော nootropic ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုဖို့အများကြီးသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။
လေ့လာရေး pramiracetam နိုင်ကြောင်းပြသ:
ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့် Spatial သင်ယူမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
High-ဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှတိုးမြှင့်
အဆိုပါနှောက် cortex အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase တိုးမြှင့်
FASORACETAM Powder ဆိုတာဘာလဲ?
Fasoracetam Powder nootropics ၏ racetam မိသားစုထဲမှာတစ်ဦး nootropic ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ Racetams အပေါငျးတို့သ 1960s ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်မိဘဝင်း Piracetam, မှပြုပြင်, ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများ၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုပတ်ဝိုင်း။ Fasoracetam ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်: (5R) -5- (piperidine-1-carbonyl)-2-One pyrrolidin ။
ပုံ FASORACETAM Powder အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
Fasoracetam Powder ဦးနှောက်ထဲမှာ receptors ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအသစ်ကအမှတ်တရများဖွဲ့စည်းများနှင့်သိုလှောင်တစ်ကဏ္ဍမှပါရာ, ထို cholinergic, ဂါဘမြို့သားအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အချိုမှု receptors ။ အများဆုံး nootropic ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်သူချင်း racetams ကဲ့သို့ပင် Fasoracetam Powder ပျော့သိမြင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ရောက်စေဖို့ဦးနှောက်ကိုသာသက်ရောက်သည်။
သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သုတေသန Fasoracetam အမှုန့်မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်, စိတ်ဖိစီးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စိတ်ဓါတ်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အခြိနျဆှဲရိုက်နှက်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပိုမိုပြီးပြီ get ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သင်ယူနှင့်သရုပ်ြပ feeling နေချိန်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ပြည်နယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်း Fasoracetam Powder အစီရင်ခံစာဝယ်အသုံးပြုသူများ။
Fasoracetam ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Fasoracetam အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Fasoracetam ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
Fasoracetam အကျိုးကျေးဇူးများသောက်သုံးသော, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသုံးသပ်ပြီး